China Fitness Kurema Kusimudza Furo Inodzivirira Tsika Barbell squat Bhegi Pad Pad Mugadziri uye Mutengesi | NQ
Kusimba Kurema Kusimudza Furo Kunodzivirira Tsika Barbell Squat Bhegi Pad Pink
Slide yedu squat Mapedhi pane ako maBarbells kuti uderedze njodzi yekurwadziwa, kupwanya, uye kukuvara uchisimudza zvinorema. Dhizaini inotakurika uye kukwana kwepasirese zvinoita kuti ive tambo dzakanyanya kusununguka dzekuita dzakanyanya kurema squats.
Zvinyorwa zveBarbell Pad:
Yakakwira Hunhu, yakasimba, isinganetsi kuchenesa, isina huremu
Ruvara uye mapatani:
pink, tsvuku, nhema, bhuruu
Yoga, Pirato, Gymnastics, Mitambo nezvimwe,
Hongu / inowanikwa (saizi / ukobvu / ruvara / logo / kudhinda / kurongedza)
Nekusimbisa, nebefu Logo, Printing Logo, nezvimwewo,
Iyi barbell pad inogona kuiswa isingashande uye kubviswa kubva kune ese maviri `` akajairwa Olimpiki uye Smith muchina mabhagi ayo anonyanya kubatsira kana iwe uchichinjisa pakati pekurovedza muviri mune yekurovedza muviri.
Iyi barbell foam sponge ine tambo mbiri dzinochengetedza iyo paden panzvimbo kuti ikubatsire iwe kutarisa pane iko kurovera pane kunetseka nezve iyo pad inodonha. Inopa yakanyanya kunyaradzwa uye chengetedzo kune yako yekuvaka muviri, simba rekusimudzira kana Crossfit Workout.
1.Each imwe neopp bag, wozoisa muhombodo. Imwe seti / bhegi + katoni.
2.Can kuva tsika Logo pamusoro bhendi / bhegi / atorwa etc.
3.Kana iwe uine chero chakakosha kurongedza, pls titumire isu neemail.
Mubvunzo: Ndingaisa sei odha? A: Unogona kutaurirana chero wedu wekutengesa munhu weodha. Ndokumbira upe iwo ruzivo rwezvaunoda se zvakajeka sezvinobvira. Saka isu tinokwanisa kukutumira iwe kupihwa panguva yekutanga.
Mubvunzo: Chii chako pasuru?
A: Isu tinovarongedza 1 pc mukati me1 polybag uye mamwe ari mukati mekatoni imwe, asi isu zvakare tinogona kupa mesh bhegi, pu bhegi uye rakarukwa bhegi.
Mubvunzo: Unopa sampuli here? zvakasununguka here kana zvimwe?
A: Hongu, tinogona kupa mharidzo, mharidzo muripo iri hwaro pamusoro ivhu ukoshi, uye vanoda iwe kubhadhara mari mitoro.
Mubvunzo: Fekitori yako inoenderana sei nezve kudzora mhando?
Tisati tarira nzvimbo yemutengi, isu tinotumira yega sampuli kumutengi kuti abvumire.
Pashure: Amazon inotengesa mushe High Quality Tsika Yekutsigira Belt Pressure Pad, Neoprene Adjustable Compression Beer Brace
Zvadaro: Yakasarudzika logo TPE yoga bhendi, Exercise Rubber kuramba bhendi, Workout kusimba Latex yemahara theraband
Barbell Squat Bhegi Pad
Foam Pfudzi Pad
Wholesale yakaderera mutengo kudzidziswa kusimba gym gym ...
New design PVC tambo tsika kusvetuka kumhanya kusvetuka ...
Nyowani Fashoni Yemitambo Workout Kusimba Kurema Liftin ...
Kupisa Kutengesa Zvigadzirwa Gym Fitness Kudzidziswa Ruoko ...